Lama Arag Lama Maqal: Atirishada Priya Prakash Oo Baraha Bulshada Ku Garaacday 5 Xidig Oo Koonfur Ah Mahesh Babu iyo Allu Arjun Ayaa Kujiraan!! – Filimside.net
Lama Arag Lama Maqal: Atirishada Priya Prakash Oo Baraha Bulshada Ku Garaacday 5 Xidig Oo Koonfur Ah Mahesh Babu iyo Allu Arjun Ayaa Kujiraan!!
Sedex maalmod kahor 11 Febraayo waxaa baraha bulshada lasoo dhigay Clip yar oo ahaa wiil iyo gabar wada sheekeysanaya balse indhaha kawada sheekeysanayaan.
Ugu dambeyna gabadhii ayaa isha u jabisay wiilkii, il jabinta ay gabadha sameysay waxay kaliftay inee kumanaan kun oo wiilala daafaha caalamka qalbiga kaga xado.
Gabadhaas waa Priya Prakash taaso ah gabar Malayalam sido kalena fanka sanadkaan kusoo biireyso hadaba horey waxaan idiin kula wadaagnay in xidigtaan ay noqotay qofka sedexaad ee hal maalin gudaheda 600 oo qof kabadan taagero ah hesho barta Instagramka.
Sido kale waxay ku dhawaatay inee jabiso iskooradii Kylie Jenner iyo Halyeeyga Cristiano Ronaldo balse wax walbo maanta ayee ka dareen sababto ah waxay si rasmia cagta u marisay ama ay kaga shacbiyad badnaatay 5 xidig oo reer koonfur ah.
Gabadhan oo 3 maalmod gudahooda fanka kujirta caana ka noqotay mudadas daafaha caalamka waxay hesha shacbiyad dhan ama ka badan 2, 9 Million oo barta Instagramka ah.
Waxay ka badatay ama ay cagta marisay 5 XIdig oo kala sidan soo socdaan.
Dulquer Salman- waxuu heestay shacbiyad dhan 1.9 Million balse maanta aya cagta lamariyay.
Rana Daggubati-Priya Rana oo xidig weyn ah aye kaga shacbiyad badnaatay barta Instagramka waxuuna xidigan heysta hader 2M oo taagero ah.
Anushka Setty- Bye Bye Anushka waxay heesata xidigtaan 2M oo shacbiyad ah barta Instagramka.
Mahesh Babu-Goor dhow ayuu kusoo biiray Instagramka waxuuna hader heesta 763kun qof balse waa Super Star weyn marhore ayaa laga rabay inuu 1 million dad ah sare u dhaafo hase ahate waa laga sare maray.
Allu Arjun- waa atoore koonfur India si weyn ugu waalan yihiin hadana 500 Kun oo qof ayuu bartisa Instagramka ku leeyahay taaso kaliftay in laga shacbiyad badnaado inkastoo uu goor dhow kusoo biray xidigaan Instagramka.
Waxaa Aqrisay 1,944
Zxp Ali adan Studioshasha Wax fasira Somaliya Mafasiran Flimanta reer Malayam
haa koonfur oo dhan waa la fasira sxb waliba Malayalam dhowr aflaam ayaan ka arkay oo la turjumay Studio-yaasha waad kaheli kartaa hadii kale Astaan Tv ka daawo ama Fanproj
Priya 3,1 M ayey mareysaaa😍